Torohay ho an'ny olom-pirenena iadiana amin'ny kolikoly ao anatin'ny vanim-potoanan'ny covid-19 - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 18 Mey 2020 ao amin'ny Hetsika,
Tsy hita maso ny kolikoly, tahaka ny covid-19. Samy miteraka voka-dratsy eny anivon'ny fiarahamonina avokoa anefa ireo. Voakasika mafy i Madagasikara. Tsy maintsy ampitomboina, araka izany, ny ezaka hahafahana mandresy ireo loza mihatra amin'ny firenena ireo.
Satria tsapa fa fotoana mety hisian'ny fanararaotana maro ataon'ny olona izao hamehana ara-pahasalamana diavin'ny firenena izao, dia nanapa-kevitra ny handray andraikitra ny Transparency International - Initiative Madagascar, izay tohanan'ny Masoivohon'i Soisa. Namolavola Torohay iadiana amin'ny kolikoly, amin'izao covid-19 eto Madagasikara izao, ny fikambanana. Tanjona ny hampatsiahy ny olompirenena rehetra, na inona na inona andraikitra raisiny, fa tsy maintsy hajaina hatrany ny mangarahara, ny tamberin'andraikitra ary ny fahamarinana amin'ny fotoana rehetra, fa indrindra mandritra ny vanim-potoana manokana tsy dia isian'ny fanaraha-maso demokratika loatra. Tsy ho resy mihitsy ny covid-19 raha tsy voahaja tanteraka ireo fitsipika ho an'ny fitantanana mangarahara ireo, ary raha tsy mirotsaka manontolo amin'ny ady amin'ny kolikoly ny rehetra (voalohany amin'izany ny manam-pahefana). Tsikaritra anefa fa tsy voahaja ireo fepetra ireo, amin'ny lafiny rehetra, ka amafisina ny tokony hisian'ny fandaminana sy ny fanetsehana faobe.
Novolavolaina tamin'ny fomba tsotra ny Torohay, amin'ny teny malagasy, ary nasiana sary mba ho tafita tsara ny hafatra. Nampahatsiahivina tao anatin'izany ny fihetsika sy ny fitandremana ara-pahasalamana tokony hatao iadiana amin'ny coronavirus, ary koa ny torolalana manan-danja rehetra ho an'ny olom-pirenena. Hita taratra ao anatin'ny pejy vitsivitsy ihany koa ny torolalana iadiana amin'ny vaovao tsy marina, ny endrika kolikoly mifandraika amin'ny valanaretina, ny fitandroana ny zo sy ny fahalalahana, ary koa ny fomba fitorohana raha sendra trangana kolikoly.
Hozaraina amin'ny olompirenena maro io torohay io, ka laharam-pahamehana amin'izany ireo monina amin'ny faritra voakasiky ny covid-19 (Analamanga, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary Matsiatra Ambony), ny mpitondra eny amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ny mpikambana ao amin'ny komity Loharano. Hitety ny faritra sisa ny ekipan'ny TI-MG, aorian'izany, ary hitohy hatrany ny fampielezana vaovao an-tranonkala sy amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera misy. Nisy ihany koa ny horonantsary sy ny horonampeo fanentanana novokarina, mifandray amin'ny torohay, mba hahakasika olona maro indrindra.
Mankasitraka ny olompirenena soisa amin'ny fanohanany ny TI-MG, ary miantso ny rehetra mba handray andraikitra sy hiambina hatrany, handresena ity krizy ity.
Mafy kokoa isika rehefa miara-miady amin’ny covid-19 sy ny kolikoly !
Tsindrio eto raha te hahazo ilay Torohay
Antananarivo, faha-18 mey 2020